Ny dia avy any Canada mankany Costa Rica dia novinavinaina hitombo 54.6% tamin'ny 2024
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny dia avy any Canada mankany Costa Rica dia novinavinaina hitombo 54.6% tamin'ny 2024
Desambra 10, 2020
Ny isan'ny mpitsangatsangana iraisampirenena avy any Canada mankany Costa Rica dia tokony hitombo manomboka amin'ny 233,143 amin'ny taona 2019 ka hatramin'ny 360,344 amin'ny 2024, mitombo amin'ny tahan'ny fitomboana isan-taona (CAGR) 9.1%, hoy ireo manam-pahaizana momba ny dia sy ny fanadihadiana.
Ny tatitra farany, 'Source Market Insight: Canada (2020)', dia nanambara fa ny toetr'andro mafana mandritra ny taona, ny sidina mivantana eo anelanelan'ny firenena roa tonta, ary ny morontsiraka maro dia hitombo hatrany amin'ny fitsidihana iraisam-pirenena avy any Canada, izay napetraka ho tonga toerana fitomboana haingana indrindra ho an'ny Kanadiana any amin'ny faritr'i Amerika.
Miaraka amin'ny safidin'ny sidina mivantana isan-karazany azo avy amin'ny seranam-piaramanidina isam-paritra manerana an'i Canada, Costa Rica dia tsena mora azo ho an'ny Kanadiana. Manana harena manintona betsaka ity firenena ity hanolotra mpizahatany avy amina toerana morontsiraka morontsiraka ka hatrany amin'ny faritra fitehirizana, izay midika fa ny firenena dia ampy fitaovana mba hikarakarana ireo karazana mpandeha rehetra ao amin'ny tsenan'ny loharano Kanadiana.
Ny fanadihadiana dia nahitana fa ny antony iray lehibe amin'ny dia lavitra avy any Canada dia miala sasatra amin'ny andro fialantsasatra amin'ny masoandro sy amoron-dranomasina. Costa Rica dia manana moron-dranomasina marobe, izay ahafahan'ny firenena manararaotra an'io fironana mihamitombo io eo amin'ireo mpivahiny kanadiana izay mitady hiala sasatra amoron-dranomasina amin'ny fialantsasatr'izy ireo. Rehefa mijery ny laoniny ny firenena avy amin'ny fiantraikan'ny COVID-19, Kanada dia mety ho lasa tsena loharano manan-danja kokoa.
Costa Rica dia miezaka ny ho tonga fizahantany ara-tontolo iainana ary mitady ny ho firenena tsy miandany amin'ny karbaona amin'ny taona 2100. Mifanaraka tsara amin'ny 37% amin'ireo kanadiana izay nilaza fa liana izy ireo ary hividy vokatra izay tsara kokoa ho an'ny tontolo iainana. *.
Ny fifantohan'ny firenena amin'ny fizahantany ara-tontolo iainana dia mety hampirisika ny mpizahatany maro avy any Kanada hitsidika. Miaraka amin'ny areti-mandringana COVID-19 mamirapiratra amin'ny fiatraikany ratsy ateraky ny olombelona eo amin'ny tontolo iainana, dia azo inoana fa betsaka kokoa ny mpanjifa no handray fanapahan-kevitra mahatsapa tontolo iainana rehefa tonga any amin'ny toeram-pialan-tsasatr'izy ireo manaraka izy ary Costa Rica dia mipetraka tsara mba handray soa avy izany.
* Data nalaina tamin'ny fanadihadiana ny kanadiana 701
Cebu Pacific dia mampitombo ny fahita matetika amin'ny sidina mankany amin'ny toeran-dehibe Aziatika
Ethiopian Airlines dia mandefa sidina Addis Ababa isan-kerinandro avy amin'ny seranam-piaramanidina Moskovo Domodedovo
Travel Manitoba dia miditra ao amin'ny World Tour Network
17 ora lasa izay
Ny zotram-piaramanidina napetraka dia miverina amin'ny Sata Air Eropeana